Afrika Atsimo : Horonan-tsary tao Free State mivoy fanavakavaham-bolon-koditra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Marsa 2008 21:34 GMT
Nafanafana indray nandritra ny folo andro ny fanoherana ny habibiana sy ny fanavakavaham-bolon-koditra ao Afrika Atsimo. Horonan-tsarimihetsika iray mivoy fanavakavaham-bolon-koditra novokarin'ny mpianatra 4 avy ao amin'ny Free State University, maneho mpanadio mihinana sakafo efa namanizan'ny mpianatra iray moa no nitarika ireo hetsika ireo. Hita ao amin'ilay horonan-tsary koa ny fanararaotana sy fampijaliana ilay mpanadio amin'ny fomba feno habibiana sy fanavakavahana. Tsy nampiseho alahelo na nenina, ary tsy mba niala tsiny akory ireto mpianatra na dia teo aza ny fanamelohana nataon'ny andrim-panjakana sy ny antoko politika isan-karazany, ary koa ny tao amin'ny toerana fonenan'izy ireo izay nanalady noho ilay horonan-tsary.
Misy fitantarana antsipirihany ny voarakitra ao amin'ilay horonan-tsary ato.
Eye Spy Truth and Lies :
Bad Entrepreneur :
Toa tsy ny olona rehetra avy ao Afrika Atsimo no nandray tsara ny fifandraisan'ny kolontsaina sy ny fiaraha-monina tsy misy fanavakavaham-bolon-koditra. 14 taona aorian'ny nahataperan'ny Apartheid no nitrangan'izao raharaha izao, mampiseho izany fa mila fotoana ela ny fiovana, ary aorian'izany aza dia mbola hisy foana ireo miavaka amin'ny fiaraha-monina ka hanosika ny fahendrena sy ny moraly. Ny Parlemanta ao Afrika Atsimo moa dia manameloka ny endrika fanavakavaham-bolon-koditra sy ny fanavahana ny lahy sy ny vavy rehetra satria mampihen-danja ny lalam-panorenana eo amin'ny firenena izany. Ankoatra io horonan-tsary mampiseho fanavakavaham-bolon-koditra io, dia nomelohin'izy ireo koa ny fanafihana nihatra tamin'ny vehivavy iray vao haingana satria nanao akanjo fohy izy. Vitsy nefa ny mpitoraka blaogy avy ao Afrika Atsimo niresaka io raharaha iray io.
Niova fomba fanjifàna hira ny Afrikana ary miditra amin'ireo goavan'ny fandefasankira iraisampirenena aza
Kenyà 4 herinandro izay
Kenyà 27 Avrily 2022
Angola 08 Marsa 2022
Tena mampalahelo ity tantara ity. Pissoa moa tsy lavitra ny io toerana io o ?
10 Marsa 2008, 22:45
Mampalahelo mihitsy, sady mahatsiravina.
Izaho eto Johannesburg ka, Gauteng ny province misy ahy – moa i Free State province hafa.
11 Marsa 2008, 08:51
Misaotra an’i Pissoa nandika ity. Izaho nanezaka ihany hoe handika fa tena sarotra loatra tamiko ilay fehezan-teny voalohandohany ireo hany ka nitady lahantsoratra tsotsotra kokoa. Fa dia faly aho mandika koa fa hitako mamelona tsara ny teny malagasiko ilay mandika e ! Sa tsy izany ?
Dia mankasitraka indray sy misaotra.
11 Marsa 2008, 12:02
Sady mamelona ny teny Malagasy ilay fandikana no mamelona ny teny Anglisy raha ho ahy manokana 🙂
Misaotra antsika isika izany.
13 Marsa 2008, 22:12